ODM प्रोसेसिंग - अद्भुत उद्यम कं, लिमिटेड
EL धूप का चश्मा
LED परिधान र सहायक उपकरणहरू
LED टोपी र हेडवेयर
एलईडी पार्टी एहसान
एलईडी धूप का चश्मा
विश्व प्रसिद्ध ब्रान्डको साथ cooperation०० भन्दा बढी पटक सफल सहयोग अनुभव।
यस उद्योगमा गहन खेतीको २० बर्ष, र विकास सन्दर्भको लागि धेरै कोटीहरू।
आर एण्ड डी टोलीमा २० भन्दा बढी बजार अनुसन्धानकर्ता, उत्पाद परीक्षक, ग्राफिक डिजाइनर, संरचनात्मक डिजाइनर र इलेक्ट्रोनिक ईन्जिनियरहरू हुन्छन्।
उही समयमा, हामीसँग शीर्ष बिक्री टोली छ। तिनीहरू धेरै पेशेवर छन् र ग्राहकहरु लाई राम्रो उपभोग अनुभव ल्याउन सक्छ।
बीएससीआई, आईसीटीआई, आईएसओ, एसक्यूए, कोका कोला कारखाना निरीक्षण, आदि।
युरोपेली र अमेरिकी चमकदार पार्टीहरू, शैली र प्रकार्य डिजाइन मा २० बर्ष उत्पादन र डिजाइन अनुभव बजार ताल संग रहन सक्छ।
सामग्री चयन मापन
उत्पादन लागत घटाउन कच्चा माल आपूर्तिकर्तासँग दीर्घकालीन सहयोग र सम्बन्ध स्थापना गर्नुहोस्।
हामीसँग निर्दोष उत्पादन प्रणाली, खरीद प्रणाली, सामग्री नियन्त्रण प्रणाली र गुणस्तर प्रणाली छ।
स्केल पत्ता लगाउनुहोस्
हामी परीक्षण र परीक्षणको लागि बहु उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रहरू वा ग्राहक आवश्यकताहरूको प्रयोग गर्दछौं।
२० वा minutes० मिनेटमा सटीक उद्धरण।
द्रुत प्रूफिंग प्रणाली
विशेष प्रोजेक्ट टीम अनुगमन गर्दछ, आइतवार उत्पादन रिपोर्ट प्रतिक्रिया।
Proposal दिन परियोजना प्रस्ताव र उद्धरण पुष्टि गर्न। १०-दिनको फास्ट प्रुफिंग सेवा नयाँ उत्पाद विकासको लागि मद्दत गर्न।
एक स्टप सेवा प्रणाली
सामग्रीहरु बाट उत्पादहरु को लागी एक स्टप सेवा।
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रणाली
एक गोपनीयता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहोस्, रेखाचित्र र कागजातहरूको तीन-चरण गोपनीयता।
घर बिक्री पछि बिक्री प्रणाली
Days दिन नि: शुल्क फिर्ती र आदानप्रदान, १२ महिनाको गुणवत्ता ग्यारेन्टी।
का लागि फन्ड्री सेवाहरू प्रदान गर्नुहोस्
गहन खेती को २० बर्ष, नमूना र सामग्रीहरु लाई प्रकृया गर्न ग्राहकहरुलाई सहयोग पुर्‍याउँछ
एनिमेशन, मनोरन्जन, फिल्म र टेलिभिजन घोषणाहरू
नि: शुल्क ब्रान्ड ई-वाणिज्य विक्रेता
नयाँ उत्पाद परीक्षण उत्पादन फाउन्ड्री दृश्य
IP व्युत्पन्न ब्रान्ड
स्टार्ट-अप ब्रान्ड फाउन्ड्री
सीमा पार एकीकरण फाउन्ड्री दृश्य
के तपाई मलाई आफ्नो कामको समय बताउन सक्नुहुन्छ?
सोमबारदेखि शुक्रवार 9: ० 00-१-18: ००; आइतवार र राष्ट्रिय बिदामा बन्द हुन्छ।
कुन ठूलो नाम OEMs को लागी iFlash हाउस छ?
"इस्लाम हाउस" विकास टोली गहन अमेरिकी र युरोपेली बजारमा संलग्न छ, र नयाँ, अनौंठो र विशेष (विस्फोटक) उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ, जुन सफलतापूर्वक संयुक्त राज्य, यूरोप र जापानमा बेचिन्छ। मुख्य अतिथिहरु डिज्नी (अमेरिका / फ्रान्स / जापान / चीन ह Chinaक Kong / चीन शंघाई डिज्नी सहित), अमेरिकी वाल-मार्ट / पार्टीसिटी / DOLLAR TREE / CVS, जर्मन PEARL, फ्रेन्च Carrefour र जापान समावेश गर्दछ।
के म तपाईंको उत्पादनहरूको नमूनाहरू बनाउन सक्छु?
धेरै उत्पादनहरू नमूना गर्न सकिन्छ, र केहि उत्पादनहरू मात्र उत्पादन चक्र र सामग्री पछि अर्डर गर्न सकिन्छ। तपाईं हाम्रो अवस्थित उत्पादनहरूलाई पनि सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। निश्चित नमूना शुल्क अनुकूलित उत्पादनहरूका लागि चार्ज गरिन्छ। विवरणहरूको लागि, कृपया हाम्रो स्टाफसँग परामर्श गर्नुहोस् (०7555-8२2374742828)।
के तपाईका उत्पादनहरूले गुणवत्ताको ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्?
यसको स्थापना पछि, कम्पनी महोत्सवहरु र भोजहरु को लागी चमकदार उत्पादनहरु को विकास र अनुसन्धान मा संलग्न भएको छ, र चमकदार उत्पादनहरु को एक गहिरो समझ छ। कम्पनीसँग विशेष डिजाइनरहरू, वृत्तचित्रहरू र निरीक्षकहरू छन् जसले उत्पादनको गुणवत्तालाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्छन्। परिष्कृत उत्पादन प्रक्रिया सुधार गर्नुहोस्, राष्ट्रिय गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण आवश्यकताहरूसँग कडा रूपमा कार्य गर्नुहोस्, परीक्षण र परीक्षणको लागि बहु उत्पाद गुणस्तर प्रमाणीकरण वा ग्राहक आवश्यकताहरूको प्रयोग गर्नुहोस्, र सबै उत्पादनहरूले आरओएचएस वातावरणीय प्रमाणीकरण सामग्री प्रयोग गर्दछन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय संरक्षण आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
IFlash हाउस को ठेगाना कहाँ छ?
जब तपाईं "प्रेम फ्ल्याश हाउस" को पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तपाईंको भ्रमण हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समर्थन हो, र हामी तपाईंलाई आफ्नो भ्रमणको स्वागत गर्दछौं!
प्रेम फ्ल्याश हाउस एक्जीबिशन हल: शेन्जेन रुन्डे फेen्शिलाइ कं, लिमिटेड, योंगटाong्ग भवनको १th औं फ्लोरमा अवस्थित छ, रेन्मीन नर्थ रोड, लुहहु जिल्ला, शेन्जेन;
उत्पादन आधार: शेन्जेन नुवेइ ते इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड, २००१ मा स्थित लिआनक्सिन रोड, वुलियन झुगु, ल Long्गg्ग जिल्ला, शेन्जेन;
सुविधाजनक यातायात, भ्रमण र निरीक्षणको लागि सुविधाजनक!
यो कारखाना वा ट्रेडिंग कम्पनी हो?
"लव फ्ल्याश हाउस" एक पार्टी लीजर ब्रान्ड हो जो संयुक्त राज्यबाट उत्पन्न भएको हो, र छुट्टी र पार्टी प्रकाश उत्पादनहरूको एक बर्ष आपूर्तिकर्ता हो! २०० in मा स्थापना भएको र शेन्जेनको Longgang जिल्ला मा स्थित, यो १ 13 बर्ष को लागी चमकदार उत्पादनहरु को एक एकल आपूर्तिकर्ता हो। हाम्रो कम्पनीको आफ्नै फ्याक्ट्री र उन्नत उत्पादन उपकरणहरू छन्, ,000,००० वर्ग मिटर भन्दा बढि मानक उत्पादन स्थान, र यसको आफ्नै अनुसन्धान र विकास टीम। उत्पादित प्रत्येक उत्पादको कडा गुण परीक्षण भयो। समर्थन OEM प्रसंस्करण, ODM प्रसंस्करण, रेखाचित्रको साथ प्रसंस्करण, नमूनाहरू र सामग्रीहरूको साथ संसाधन।
शेन्जेन रुन्डेफेंग इन्डस्ट्रियल कं, लिमिटेड
प्रदर्शनी हल ठेगाना: १th औं फ्लोर, ब्लक ए, योंगटाong्ग भवन, 46१4646 रेन्मीन उत्तर रोड
हटलाइन परामर्श: 86-755-82374286
ठेगाना: १th औं फ्लोर, ब्लक ए, योंगटाong्ग भवन, 46१4646 रेन्मीन उत्तर रोड
© प्रतिलिपि अधिकार - २०२१: सबै अधिकार सुरक्षित। तातो उत्पादनहरू - साइटम्याप